တခါတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ… မောင်လပြည့် (တက္ကသိုလ် ဆယ်ရက်) PART III | PoemsCorner
အပိုင်း ၂ မှ အဆက်..
ဒုတိယနေ့ ရဲ့ ပထမဦးဆုံး အတွေ့ အကြုံ
ဒီလို နဲ့ ပထမနေ့ ကတော့ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ စာမေးပွဲ ခန်းထဲကထွက်လာတဲ့ကျောင်းသာ တိုင်းရဲ့ မျက်နှာ ကတော့ အပြုံးပန်းတွေနဲ့ ဝေလို့ ပေါ့။ တန်းလုံးကျွတ် အောင်မယ့် စာမေးပွဲ ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့ဗျာ။
ဒုတိယနေ့ ကတော့ နည်းနည်း ခက်တယ်ဗျ . Philosophy လို့ ခေါ်တဲ့ ဒသနီကဗေဒ..
ကျွန်တော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားဖြေပေမဲ့ တချို့ စာတွေကတော့ မေ့ တယ်ပေါ့ဗျာ.
ဘေးနားက မိန်းကလေးကတော့ အလိုက်သိပါတယ်။
အစ်ကို ယူ အုံးမလား တဲ့ လေ။
စ..စချင်းဆိုတော့ ကျွန်တော်က နည်းနည်း မူ ပါတယ်။ ဒါမျိုး ကို တသက်နဲ့ တစ်ကိုယ် တခါမှ မလုပ်ဖူးပါဘူး ခင်ဗျာ။
သူငယ်တန်းကနေ ဆယ်တန်းအထိ ပင်ကိုယ် ကြိုးစားမှူ့ နဲ့ သာ စာမေးပွဲ မှန်သမျှ ကြိုးစာခဲ့ရတာပါ။
ဒီတော့ . ဒီလို လုပ်ရမှာ ရှက်သလို ။ လုပ်လည်း မလုပ်တတ်ပါဘူး ။
ဒါပေမယ့် . သူများ မိုးခါးရေ သောက်တော့လည်း ကိုယ်လည်း ဘီယာ လောက်တော့ သောက်ကွာ ဆိုလို့ .အနှီမိန်းကလေး ပေးတဲ့ စာရွက် အပိုင်းအစ လေးကို ပဲ လက်တုန်တုန် နဲ့ လှမ်းယူလိုက်မိပါတယ်။
ကျွန်တော် မဖြေနိုင်တဲ့ ပုစ္ဆ္တာ လေးပါ ပဲ ။
ဒီ တစ်ပုဒ် မဖြေလို့ လည်း စာမေးပွဲမကျ ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူ့ သဘာဝ အရ . ပို ရ ရင်တော့ ပိုလို ချင်မိပါတယ်။
ကျေးဇူးပါပဲနော် မိုး ။
နောက်ရက်တွေ များမှာလည်း အင်္ဂလိပ်စာ နဲ့ ပတ်သက် တာတွေဆိုတော့ စာရွက်ဖြူ မိုက်ကရိုလေးတွေက တွေက ပိုမို ပလူပျံလာပါတယ်။
ထို့ ထက် ပိုမို ဆိုးရွား စွာ ရဲတင်း ကြသူများကတော့ . ပြဌာန်း စာအုပ်ကြီးကို စာရေးစားပွဲ ခုံအောက်တွင် ထားကာ ပေါ်တင်ကြည့်ကူးကြသည်။
သူ တို့ ပုံစံ ကြည့်ရသည်မှာ တစ်နေ့ ကို နေ့ တွက်ခ ငါးရာကျပ် ပေးထားသဖြင့် ထင်ရာစိုင်း မည့် ပုံစံများအတိုင်းသားပေါ်လွင်နေပါသည်။
စာမေးပွဲ ခန်းမ အသွင် သည် စာကူးပွဲ ခန်းမ အဖြစ် တဖြည်းဖြည်း အသွင်ပြောင်းလာပါသည်။
စာရွက်များ ဗြိ ကနဲ့ ဖြဲသံများ ၊ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး စက္ကူလုံးများဖြင့် ပစ်ပေါက် နေသည်များက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အံ့အားသင့်စရာဖြစ်မိပါသည။်
မည်သို့ ပင် ဆိုစေ နေ့ တွက်ခ နားလည်မှူ့ ကြေးအဖြစ် တစ်နေ့ လျှင် ငါးရာ ပေး၍ ဖြေရသော စာမေးပွဲ ကြီး.က အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးသွားချေပြီ ။
စာမေးပွဲဖြေဆိုကြသည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူ တိုင်းသည် ကျောင်းအပြင်သို့ ခေါင်းကို မော့ ပြီး ရင်ကို ကော့ကာ ထွက်လာကြသည်။ မိဘများက စိုးရိမ်တကြီး မေးလိုက်သည့်မေးခွန်းတိုင်းကိုလည်း ပြုံရွှင်စွာ ပင် ပြန်ဖြေလိုက်ကြသည်။
သားလေး ဖြေနိုင်ရဲ့ လား ကွယ်။
ဖြေနိုင်တာပေါ့ မေမ ရာ ။
သမီးကြီး ။ ကျက်ထားတာတွေ တိုးရဲ့ လား ဟင်။
ဟာ အမေကြီးရာ။ အားလုံးကွက်တိပဲ သိလား ။
အားလုံး သောကျောင်းသာများက ပျော်ရွှင်နေကြသည်။ တချို့ ကလည် ပေါ်တင်ပင် ဟစ်ကြွေးကြသည်။
စာမေးပွဲ ပြီးဆုံးခြင်း အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် . သန်လျင် တံတားပေါ်တွင် မိုက်ကရို စာရွက်ငယ်များ ၊ ဘာဂျာ စက္ကူခေါက် လေးများက ဟို တစ်စ . ဒီတစ်စ..လေတွင် ကော့ပျံဝဲလျက် ရှိသည်။
ကျွန်တော်သည် နှင့်တကွ အားလုံးသော ကျောင်းသားများသည် အောင်စာရင်းကြည့်ရန်ပင် မလို ပဲ တန်းလုံးကျွတ် ကို အောင်မြင်ကြသည်။
လူချင်း တူသော်လည်း ကံချင်း မတူ ကြသူများ
ကျူရှင် မှ အချို့ သူငယ်ချင်းများကတော့ ပြောသည်။ နင်တို့ တာဝ က ကံကောင်းလို့ အပြင် မှာဖြေရတာ..
ငါတို့ ဒဂုံ တက္ကသိုလ် က.တော့ စာမေးပွဲကို တက္ကသိုလ်ကျောင်း ၀င်းထဲမှာပဲ . ဖြေရတာ။
ဒီတော့အရမ်းကြပ်တယ်။ လုံးဝ မချောင်ဘူးတဲ့ ..လှူပ်လို့ တောင်မရဘူး ဆိုပဲ ..
ကျွန်တော်သည် အဆိုပါ ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှ သူငယ်ချင်းကို ကြည့်လိုက်သည်။ သူတို့ ပြောပုံ အရဆိုလျှင် သူတို့ သည် စာမေးပွဲကို .စာမေးပွဲနှင့်တူအောင်တော့ ဖြေ ခဲ့ ရသည့် ပုံပင် .
ဟုတ် ၊ မဟုတ်တော့ ကျွန်တော်မသိ
ချောင် သလား ကြပ်သလား ဆိုတာကတော့ ကုသိုလ် ကံ လို့ ပဲပြောရမလား နော်။
အဝေးသင် တက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ်
အနီးကပ် ဆယ်ရက်တွင် မနှစ်က တွေ့ ခဲ့သော မိုး နှင့်ပြန်ဆုံသည်။ ခင်မင် မှူ့ အတိုင်းအတာ ပိုလာသည်။
သူကလည် . ကုမ္မဏီတစ်ခုတွင် အလုပ်ဝင်နေသဖြင့် ကျူရှင် မတတ် အား ။ ထို့ ကြောင့် ပထမနှစ်ကို ရသလို ဖြေခဲ့သည် ဟု ဆိုသည်။
ဒီနှစ် ဒုတိယနှစ် ကတော့ မချောင် ဟု ကြားသည။် တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲတွင် ဖြေရမည်။
ဒီတော့ စာ ကို ကြိုးစားပြီး သေချာ လုပ်ရသည်။ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း တစ်သိုက် စုပေါင်းပြီး စာကျက်ကြသည်။ မုန့် တွေ အတူစားကြသည်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘ၀ ကို ရသလောက် ကြိုးစားပြီး ပျော်စရာရှာမိသည်။
သွားအတူ လာအတူ စား အတူ ဖြစ်လာသော မိုး ကို ကျွန်တော် ပို ၍လေ့လာခွင့်ရလာပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ဆုံးတိုင်း မိုး အပေါ် တွင် ကျွန်တော့် စိတ်များ ပြောင်းစ ပြုလာသည်ကို ကျွန်တော် ကိုယ့်ဘာသာ ရိပ်မိလာသည်။
ချစ်သူ အလှဘွဲ့ 
ကျွန်တော့် စိတ်ထဲတွင် မိုး သည် တနေ့ တခြား ပို၍လှ လာသည်ဟု ခံစားမိပါသည်။ ယခင် က ကတုံး ဆံပင်ပေါက်နှင့် မိုးသည် ယခု တော့လည်း ဂုတ် အထိ ၀ဲပျံနေသော ဆံနွယ်လေးများက လေတိုက်လိုက်တုင်း ယမ်း ခါနေပါသည်။ ထို ဆံနွယ်လေးများ ယိမ်း ကသလို ကျွန်တော်၏ နှလုံးသား လေးလည်း ကရင်ဒုံးယိမ်း က နေပါတော့သည်။
မိုး ၏ အသံသည် ဆည်းလေး သံလေးများလို သာယာလှပါသည်။ မိုး ၏ မျက်နှာသည် ကောင်းကင်တွင် ညအခါ ထိန်ထိန်သာသော လမင်းကြီးကဲ့သို့ ကျွန်တော့် ရင်ထဲတွင် ပြည့်လျှံထိန်လင်းနေပါသည်။ မိုး သုံးနေကျ ဘော်ဒီ စပရေး ၊ လိုးရှင်း နှင့် သူ၏ ကိုယ်သင်းရနံလေး များသည် စုပေါင်းလိုက်သောအခါ ကျွန်တော့်အဖို့ တ်ိမ်းမူးဖွယ်ရာ ဆွဲဆောင်မှူ့ ကို ဖြစ်စေပေါသည်။
မိုး ဆိုသော နာမည် လိုက်အောင် အေးချမ်းသော ၊ သန့် စင် ကြည်လင် သော မိန်းကလေး ကို ကျွန်တော် အဘယ်ကြောင့် ရင်မခုန် ပဲ နေပါအံ့မည်နည်း ။
ကိုယ့် အပေါ်ကို ပေါက္ကရာ ၀သ မိုးများ ရွာချလိုက်ပါတော့ လားကွယ်။
သူငယ်ချင်းများကလည်း ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုလျှင် အားကိုးရသည်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်တည်း မဆုံ ဆုံအောင် ဖန်တီးကြိုးစားပေးကြသည်။ အအေးဆိုင်တွင် အတူထိုင်ကြပြီ ဆိုလျှင် ဟို ကိစ္စ ဒီကိစ္စ အကြောင်းပြကာ ရှောင်ပေးတတ်ကြသည်။
အတော့်ကို ခင်ဖို့ ကောင်းပြီး အလိုက်သိတတ်သော သူငယ်ချင်း များပါတကား..
ရင်ခုန်ဖွယ်ရာ နေ့ ရက်တွေ က ပိုမို ရင်ခုန်ဖို့ ကောင်းလာသည်။
အနီးကပ် ဆယ်ရက်သာ တတ်ရသော ကျောင်းကို ဆယ်ရက်ထက် ပိုပြီး တတ်ချင်စ်ိတ်များ တဖွားဖွားပေါ်လာသည်။
ကျောင်းက အပြန် ဘတ်စ်ကား ပေါ်တွင် သူငယ်ချင်းက နေရာ ဦးထားကြသည်။ မိုးနှင့် ကျွန်တော်က တခုံတည်းတွင် ထိုင်လျက် ။
လူများ ပြည့်ကြပ်နေသော Air-Con ဘတ်စကားကြီးတွင် သူရောကျွန်တော်ပါ ချွေးပြိုက်ပြိုက်ကျ ရလေသည်။ မိုး၏ နဖူးတွင် စို့ နေသော ချွေးလေးများကို တစ်ရှူး စက္ကူဖြင့် ကြင်နာစွာ သုတ်ပေးခွင့် ဘယ်တော့ များမှ ရပါလိမ့်နော်။
အချိန်တစ်နာရီမျှစီးရသော ဘတ်စ်ကားသည် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင် လွန်စွာ မှ မြန်နေသလို ။ အချိန်တွေက ကုန်တာမြန်လိုက်လေချင်း။
ဒါပေမယ့် နှလုံးသား ရေးကို ထင်သလောက် အားမထုတ်နိုင်ခဲ့ပေ။
ဒုတိယနှစ် စာမေးပွဲကို တော့ ကျောင်းထဲမှာ ကျင်းပမည်ဟု ကြိုသိရသဖြင့် သင်ခန်းစာ များဖြင့်သာ နပန်းလုံးနေရသည်။
ပန်းဆိုးတန်း မှ ကျူရှင် ဆရာကြီး ၏ သင်ပြမှူ့ များကြောင့် ကျွန်တော်၏ သင်ခန်းစာ များသည် အတော်ပင် ကျေညက်လာပါသည်။
ဒီလိုနှင့် ဒုတိယနှစ် စာမေးပွဲကြီး စတင်ပါသည်။
စာမေးပွဲခန်းတွင် စောင့်ကြပ်ကြသော တက္ကသိုလ်ဆရာမ များက အတော့်ကို တင်းကြပ်စွာ စောင့်ကြည့် ကြပါသည်။
အော်… ပထမ နှစ် ကတည်းက ဒီလိုမျိုး ဖြစ်သင့်တာပေါ့ ဗျာ။
ဒါတောင် . မကောင်းသော အကျင့်ဆိုး ကိုဆက်လက် ကျင့်သုံးချင်သော ကျောင်းသား အနည်းငယ်က မိုက်ကရို စက္ကူဖြူလေးများ ကိုအားကိုးချင်ကြသည်။
တက္ကသိုလ် ဆရာမ များကလည်း လင်းယုန် တို့ ၏ မျက်လုံးမျိုးဖြင့် တွေ့ သမျှကို လိုက်လံ သိမ်းဆည်းခြင်း ၊ နောက်နောင် မလုပ်ရန်ပြင်းထန်စွာ တားမြစ်ခြင်းများ ပြုကြ၏ ။
ဒုတိယနှစ် အင်္ဂလိပ်စာ စာမေးပွဲ သည် စာမေးပွဲ နှင့် တူ လာပါသည်။
ကျွန်တော်သည် ရှေ့ ဆယ်ခုံကျော် မှ မိုး ကို လှမ်းကြည့်လိုက်ပါသည်။ သူမသည် ယခင်ကလို မဟုတ်တော့ ပေ။ တည်ငြိမ်စွာဖြင့် ဖြေဆိုနိုင်လေပြီ ။
သို့ နှင့် . ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်စလုံး ၏ နာမည်များ အောင်စာရင်းတွင် ရေးထိုး နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။
္မဤနောက်ဆုံးနှစ် သည် ကျွန်တော့် ဘ၀ ၏ မှတ်တိုင် ဟု ဆိုလျှင်လည်း မမှားနိုင် ။ ကျူရှင် များတတ်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် က အတူတူ တတွဲတွဲ ။
ကျွန်တော်က အနှေး နှင့် အမြန် ဖွင့်ပြောတော့မည် ဟု မိုးကလည်း ကြိုတင် ရိပ်မိနေပုံပေါ်သည်။ စကားပြောလိုက်လျှင် ရေလာမြောင်းပေး ပုံစံများ ကို အနှောင့်အသွားမလွတ် ပြောတတ်သည်။
ပမာ ဆိုရလျှင် ။ ကျွန်တော် ၀တ်သော အကျီ င်္များ ကို တွန့် ကျေနေလျှင် သူမက မကြိုက် ။
အမြဲလိုလို မြည်တွန် တောက်တီးတတ်သည်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ကလည်း မီးပူတိုက်ပေးမည့်သူ မရှိ ကြောင်းပြောလျှင် .
နောက်ဆိုရင် မိုး တိုက်ပေးမှာပေါ့ ဟု မချိုမချဉ်ပြောပြီး လျှာကလေးထုတ်ကာ နောက်တတ်သည်။
ကျွန်တော်သည် ငယ်စဉ်က ရေမွှေး ကို လုံးဝ မကြိုက်သော သူဖြစ်သည်။ ပေါင်ဒါ လောက်သာ လိမ်းတတ်သည်။ ကလေးဘ၀ က အမေ က ရေမွှေးဆွတ်ပေးလျှင်လည်း သိပ်မကြိုက်ချင် ။ ရေမွှေးနံ့ သည် ကျွန်တော့်အတွက် ခေါင်းမူးသလိုလို ခံစားရပါသည်။
ထို့ ကြောင့် အသက်အရွယ် ရ လာသောအခါ ယောက်ျားလေး တို့ တွင် ဖြစ်တတ်သည့် . ဂျိုင်းပတ်စော် နံသည့် ကိစ္စ သည် မိုး နှင့် ကျွန်တော်အကြားတွင် အဟန့် အတားတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကျွန်တော့်ကို အားနာ ၍ ဖွင့်မပြောသော်လည်း ကျွန်တော် နှင့် ကားအတူစီးလျှင် မိုးအတွက် အနေကျုံ့ စေပါသည်။
ထို့ ကြောင့် .. မိုးသည် ကျွန်တော့်အား မွေးနေ့ လက်ဆောင် အဖြစ် . ဘော်ဒီစပရေး တစ်ဗူးလက်ဆောင်ပေးပါတော့သည်။ ဒီတော့မှ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ Persoanlity ပိုင်းကို သေချာဂရုစိုက်ရပါတော့သည်။
သူငယ်ချင်းတွေက တော့ ပြောသည်။ အချစ်နှင့် တွေ့ လျှင် လူ တိုင်းသည် လှ ချင်လာကြသည် တဲ့။
မှန်ပေသည်။ ကိုယ်ချစ်သော မိန်းကလေး ရှေ့ တွင် ကျွန်တော်သည် သန့် ရှင်းမွေးပျံနေသော ရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းသည့် ယောကျာ်းလေး တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်လာသည်။ ထိုနေ့ မှစ ၍ ကျွန်တော် ၏ ရေမွှေးမကြိုက်သော မကောင်းသည့်အကျင့် ကို စွန့် လွှတ်လိုက်ရပါသည်။
နေ့ စဉ်ကျောင်းသွားလျှင် ရေမွှေး တစ်ပုလင်းလုံး မှောက်ကျ သည့်အလား လွန်စွာ မွှေးကြိုင်လျက် .
ကျွန်တော်သည် သူမကို ဖွင့်ပြောဖို့ တွန့် ဆုတ်မိနေပြန်သည်။ ကျွန်တော့် တွင် ငဲ့ညာ စရာများ က ရှိလေသည်။
မိသားစုတွင် ကျွန်တော်က အကြီး ဖြစ်သည်။ မိဘကို လုပ်ကျွေးဖို့ နေနေသာသာ ကိုယ့် ၀င်ငွေကိုပင် လခစား ၀န်ထမ်း တစ်ဦးအနေဖြင့် ကြိုးစား၍ ရုန်းကန်ရှာဖွေနေရသည်။
သူငယ်ချင်းများကလည်း ကျွန်တော့် ကို အားမရ ဖြစ်ကြသည်။ ရည်းစား ထားခြင်းသည် ပညာတတ် ဘွဲ့ ရပြီးမှ ထားရမည်ဟု မဆိုလို ။ ငွေ ကြေး ဓန အင်အား ရှိခြင်း ၊ မရှိခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်ပေ။
ယနေ့ ရည်းစားဖြစ်ပြီး မနက်ဖြန် လက်ထပ် ရမည်ဟူ၍လည်း မည်သူမှ ဥပဒေ မထုတ်ထား ပေ။
သို့ သော်ကျွန်တော်ကမူ စာမေးပွဲ ပြီးမှ ဖွင့်ပြောရန်သာ ရည်ရွယ်ထားသည်။ စိတ်အာရုံများ မပျံ့ လွင့်စေချင်။ သူရောကျွန်တော်ပါ သင်ခန်းစာထဲတွင် သာ အာရုံစိုက်စေရန်ဖြစ်သည်။
နှလုံးသားရေးရာကိစ္စများကြောင့် စိတ်မလေ ချင် ပါ။ စာမေးပွဲ ပြီး တဲ့အချိန်မှပဲ ချစ်သူနဲ့ အတူ လွတ်လပ်စွာပျော်ချင်ပါသည်။
ဒါပေမယ့် . မမျှော်လင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု က ပေါ်လာပါသည်။
မိုး ၏ အိမ်မှ မိဘ များက သဘောတူထားသူ ဆိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးပေါ်လာပါသည်။ သူသည် နိုင်ငံခြား ပြန်ဖြစ်ပြီး စင်ကာပူတွင် လုပ်ငန်း များလုပ်ကိုင်နေသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ငယ်သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူ မြင့်ထွန်း က ကျွန်တော့်ကို အားမလိုအားမရ ပြောသည်။ ဟော့ကောင် လပြည့် လက်နှေး ရင် ခံသွားရမယ်နော်။ ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိဘူး။။ လုပ်စရာရှိတာ ခက်သွက်သွက်လုပ်ထား ။ ဟို က နိုင်ငံခြားပြန် ဥစ္စာ ပေါ ရုပ်ချောနော် ။
သမီးရှင် ဘက် က ဘာမှ ငြင်းစရာမလို တဲ့သူ ။
တော်ကြာ. အလာကောင်းပေမဲ့ အခါနှောင်းသွားပါပြီလို့ အပြောမခံရစေနဲ့ ကွာ.။။
ထို သတင်းကို ကြား လျှင် ကြားချင်း ကျွန်တော်သည် ဦးခေါင်းထက်မှ ဆံပင်များ ထောင် လာပါသည်။ ရင်ထဲတွင်လည်း တလှပ်လှပ်နှင့် ကိုယ့်အချစ်ဆုံးသူကို ဆုံးရှံးတော့မယောင် ထင်လာပါသည်။ ခြေလက်များကလည်း ကြောက်စိတ်ဖြင့် ရေခဲစ်ိမ်ထားဘိသကဲ့သို့ အေးစက်နေပါသည်။
တခါမှ ရည်းစား မထားဖူးသဖြင့် မည်သို့ ဖွင့်ပြောရမည်ကိုလည်း မသိပါ။ ကျွန်တော်သိ သည်ကား မကြာမီ အချိန်တွင် မိုး ကို ဆုံးရှုံးရတော့မည်။ အချစ်ဆုံး မိန်ကလေးအား အခြားသူတစ်ဦးက သိမ်းပိုက်ချေတော့မည်။
ရည်းစား စာ လည်း မရေး ဖူးသဖြင့် မရေးတတ်ပါ။ သူငယ်ချင်းများကို ရေးခိုင်း ရင်ကောင်းမလား ။ အဘယ်ကြောင့်မှန်းမသိ ထိုကိစ္စ မျိုးတွင် ကျွန်တော်သည် လွန်စွာ နှူတ်ဆွံ အ နေတတ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးတွင် ကြံရမသည့်အဆုံး ဖြစ်ချင်ရာဖြစ် . မျက်နှာချင်းဆိုင်ကာ ဖွင့်ပြောတော့မည် ဟု သံဓိဌာန် ချလိုက်ပါတော့သည်။
ကျူရှင်မှ အပြန် မိုး တွေ သည်းနေသော နေ့ တစ်နေ့ 
အရပ်ရှစ်မျက်နှာမှ လေပြင်းများတိုက်ပြီး မိုး သည် အငြိုးကြီးကြီးဖြင့် သန်းထန်စွာရွာသွန်းနေပါသည်။
ကျူရှင်မှ အပြီး အိမ်အပြန်တွင် မိုး က TAXI ဌားပြန်မယ်ဟု ဆိုပါသည်။ ကျွန်တော်က သူ့ ကို လိုက်ပို့ ခွင့်ရပါသည်။ သူတို့ လမ်းထိပ် တွင် ကားရပ်ပြီး အဆင်း . ညောင်ညိုပင်အောက်တွင် ကျွန်တော်သည် သူ့ ကို မရဲတရဲ နှင့် ဖွင့်ပြောဖို့ ကြိုးစား ပါသည်။
လေရောမိုးပါ သည်းထန်လာသည်။ ညောင် ပင် အောက်တွင် လူ ရှင်းသဖြင့် . ကျွန်တော့်အတွက် အဆင်ပြေလှသည်။ ကျွန်တော် တောင် ဒီလောက် ချမ်းနေလျှင် မိုး သည် မိန်းကလေး ဖြစ်သောကြောင့် ပို ပြီး ချမ်းမှာ အသေအချာပင် ။
ဖြစ်နိုင်လျှင် ရင်ခွင်ထဲသို့ .ထွေးပွေ့ ထားလိုက်ချင်မိပါသည်။
မိုး . ရေ ခဏ . ငါ နင့်ကို ပြောစရာရှိလို့ ..
ဟာ.. လပြည့်ကလည်း ကွာ ။ မိုးတွေ ဒီလောက်သည်းနေတာ . အိမ်ကိုပဲ ပြန်တော့မယ် ။ ဘာပြောမလို့ လည်း မြန်မြန်ပြော ။ အရေးမကြီးရင်လည်း နောက်နေ့ မှ ပြော ပါလား။
မဟုတ်ဘူး အရေးကြီးတယ်။. အရမ်း အရေးကြီးတယ်။ ဟိုလေ.ဟို… ဟိုဟာလေ…
ငါ နင့် ကို ချစ်တယ် ဟာ…..
ကျွန်တော်သည် အချိန်မရှိသဖြင့် ခိုက်ခိုက်တုန်အောင် ချမ်းနေသည့်ကြားမှ မိုး ဆိုသော မိန်းကလေးကို မိုးတွေ သည်းထန်နေသည့် အောက်တွင် ကဗျာ မဆန်စွာပင် ဖွင့်ပြောလိုက်မိသည်။
ဘာ..ဘာပြောတယ်.. နင်က ငါ့ကို ..
လပြည့်ရယ်။။ဘယ်လို ဖြစ်တာလဲ .. နင် က တကယ်လား.. နောက်နေတာလား။။
သူမက သိနေရက်သားနှင့် ရယ်ကျဲကျဲ လုပ်ကာ မေးသည်။
ငါ အရင်ကတော့ စာမေးပွဲ ပြီးမှ ဖွင့်ပြောမလို့ ပါပဲ ဟာ . ဒါပေမယ့် နင့် အိမ်က သဘေတူထားတဲ့ ဟို စင်ကာပူ ကဆိုတဲ့လူ ပေါ်လာလို့ ငါ အခုလို အရင်လို နေရတာပေါ့ ။
ကျွန်တော်သည် မိုးရေ ကြောင့် ချမ်းတာလား ။ သူမကို ကြောက် ၍ ချမ်းတာလားတော့မသိ ။ နှူတ်ခမ်းများပြာကာ . မေး တုန်လျက် သူ့ ကို ကြိုးစားပြီး ရှင်းပြနေရသည်။
မိုး က မျက်မှောင်ကုတ်လျက် .. ပြောသည်။
ငါ့ အိမ်က သဘောတူ ထားတဲ့ လူ ဘယ်သူများပါလိမ့် .. အော်..သိပြီ .. သိပြီ … နင့် ကို ဘယ်သူတွေကပြောလိုက်တာလဲ ။
ဟို အကောင် တွေ ပြောတာမဟုတ်လား ။ နင်တော့လေ မိုးတွေ ရွာနေတာ.. မိုး ကြိုးပါ ပစ်အောင်လုပ်နေပြန်ပြီ ။
အဲဒါ ငါ့ ရဲ့ ဝမ်းကွဲ အစ်ကို စင်ကာပူ ကနေ ခဏ ပြန်လာတာ..သိပြီလား ဟဲ့ ..
အောင်မလေး ဗျာ…ရင်ထဲ က အပူလုံးကြီး လျှော ခနဲ ကျသွားသလို ပါပဲ ။ ကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါပြီ ။ သူငယ်ချင်းတွေ က ကျွန်တော့်ကို အချွန်နဲ့ မပြီး . မြန်မြန်ဖွင့်ပြောအောင် ဇာတ်လမ်း ဆင်လိုက်ကြတာပေါ့ ။
ဟိုကောင် မြင့်ထွန်း ဆိုတဲ့အကောင် ပေါ့.. ဒင်းတော့လား..
ဒါပေမယ့် . ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့ ဆင်ထားတဲ့အတိုင်း ကွက်တိကို ၀င်သွားပါပြီ ။ ဖွင့်ပြောပြီးကာမှ မထူးတော့ပါဘူး ။ ချောလဲ ရောထိုင် ရင်းနဲ့ ပဲ အဖြေတောင်းဖို့စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။
အခုလို မြန်မြန်ပြောလိုက်တာပဲ ကောင်းပါတယ်။ ရင်ထဲ က အပူမီးတစ်ခုတော့ ငြိမ်းသွားတာပေါ့။
သူမ ကတော့ တည်ငြိမ်စွာနဲ့ ပဲ မိန်းကလေးတို့ ထုံးစံ အတိုင်း စဉ်းစာ ပါရစေအုံးပေါ့နော်။
တခါတုန်းက တက္ကသိုလ်မှာ…အပိုင်း ၄ တွင် ဆက်လက် အားပေးတော်မူကြပါခင်ဗျာ
အတိတ်သည်တစ်ခါတုန်းကဖြစ်၏ – အပိုင်း(၁)
Leave comment No comment & 3,676 views